उत्कृष्ट गायकको अवार्ड अमृत खातीलाई
पाँचौ छायाछवि तीज अवार्ड २०७५ मा गायक अमृत खातीले उत्कृष्ट गायकको अवार्ड हात पारेका छन । अमृत खाती र स्मृती गौतमको गीत नाचौँ घुमी घुमी बोलको गीतबाट ह्याट्रिक गर्दै तीन वटा अवार्ड हात पारेका हुन । उक्त गीतबाट गायिका स्मृती गौतम र सुनिल लामिछानेले उत्कृष्ट कम्पनीको रुपमा अवार्ड प्राप्त गरेका छन । कार्यक्रम छायाछवि क्रियसनले सेलिब्..
भक्तजनको सहजताको लागि पशुपति प्रवेशमा तीन स्थान खुल्ला
काठमाडौँ, २७ भदौ । हरितालिका (तीज) मा पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा एवं दर्शन गर्न आउन..
दीपक र दीपीकाको फेरि उमेर ढल्कन्छमा रोमान्स(भिडियो सहित)
छक्का पञ्जा ३ को फेरि उमेर ढल्कन्छ, पछि कालै पल्कन्छ’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ..
बंगलादेशलाई २-० गोल अन्तरले हराउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा
ढाका, २३ भदौ । बंगलादेशलाई २-० गोल अन्तरले हराउँदै नेपाल साफ च्याम्पियनसिप फुटबल..
बुगीबुगी बिजेता कविता र पल शाहको रोमान्स
काठमाडौं, १८ भदौ । केही समय अगाडि सम्पन्न भएको बुगीवगीका विजेता कबिता नेपालीले चर्चित अभिनेता पल शाहसँग म्युजिक भिडियोमा एकसाथ काम गरेकी छिन । वुगीवगीका बिजेता भएपछि कविताको पहिलो यो म्युजिक भिडियो हो । गायक राज खम्बुको नयाँ म्युजिक भिडियोको छायान्कन केही दिन अगाडि सम्पन्न गरिएको छ । भिडियो सम्पादक तथा निर्देशक टेकेन्द्र शाह र [..
ब्राईट एन्जल्स ईंलिस स्कुलले पायो ‘गोल्डेन पिक’ तिज उपाधि
काठमाडौ, १७ भदौ । उपत्यका व्यापी स्कुल स्तरीय पहिलो गोल्डेन पिक तिज नृत्य प्रतियोगिता’को उपाधि ब्राईट एन्जल्स ईंलिस स्कुलले पाएको छ । तीजको अवसर पारेर गोल्डेन पिक हाईस्कुलले आयोजना गरेको ‘उपत्यका व्यापी स्कुल स्तरीय पहिलो गोल्डेन पिक तिज नृत्य प्रतियोगितामा एआईए स्कुल दोस्रो र सृजना ज्ञानसागर स्कुल तेस्रो भएका छन् । त्यैगरी प्रत..
भैरव नाच सम्पन्न
भक्तपुर, १६ भदौ । मध्यपुरथिमिमा विगत चारदिनदेखि नियमित रुपमा सञ्चालित मल्लकालीन लाय्कु भैल अर्थात भैरव जात्रा आजबाट सम्पन्न भएको छ । गतवर्ष लायकु दरबारबाट प्रर्दशन गरिएको यो नाच यस वर्ष भने लायकु भैलका नायो पमाः श्यामकाजी श्रेष्ठको स्वीकृतिमा मध्यपुरथिमि ५ नासननी टोलका प्रजापतिहरुले सञ्चालन गरेका हुन् । तान्त्रिक एवं ऐतिहासिक भै..
काठमाडौँ, १४ भदौ । एसिया कप छनोटअन्तर्गत नेपाल–यूएइबीचको दोस्रो खेल शुरु भएको छ । मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा शुरु भएको खेलमा नेपालले यूएइविरुद्ध टस जितेर फिल्डिङ रोजेको छ । पहिलो खेलमा बुधबार ओमानसँग पराजित नेपाललाई आजको दोस्रो खेल जित्नु आवश्यक छ । यूएइ र नेपाल दुवै अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय मान्यता प्राप्त देश हुन् । पार..
काठमाडौ, १४ भदौ । एसिया कप छनोट क्रिकेट प्रतियोगितामा आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले टस जितेर बलिङ रोजेको छ । नेपालले बलिङ गर्ने भएसँगै युएईले ब्याटिङको निम्तो पाएको छ । मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरस्थित किनरारा एकेडेमी ओभलमा नेपाल जितको खोजिमा रहेको छ । नेपालका लागि यो खेल निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । युएईलाई पराजित गर्न सके नेपालको..
प्रियंका निक जोनससँगको रोमान्समा
कलाकार भनेका सार्वजनिक व्यक्ति हुन । उनीहरु कोसँग हिड्छन, के खान्छन, कस्तो पहिरन लगाउछन यो सबै आम मानिसलाई चासोको विषय हो । बलिउड नायिका प्रियंका चोपडा यतिवेला चर्चामा छिन । उनको चर्चाको कारण भने उनका हुनेवाला श्रीमान निक जोनस हुन । उनले आफ्ना हुनेवाला श्रीमान निक जोनससँग प्रियंकाले क्वालिटी टाइम शेयर गर्ने मौका छोडेकी छैनिन् [..
ललितपुर, ११ भदौ । गोदावरी नगरपालिका– ११ स्थित गोदावरी बहूद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माण शुरु भएको छ । गत वर्षदेखि रङ्गशालाको निर्माण शुरु भएकामा आगामी दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । रङ्गाशाला निर्माणले यस क्षेत्रमा खेलकूदको विकास गर्न सहयोग पुग्ने नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बताए । उनले भने, “रङ्गशालाको निर्म..
काठमाडौँ, १० भदौ । एशिया कप छनोटको लागि विशेष प्रशिक्षणका लागि श्रीलङ्कामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज त्यहाँको कोल्ट्स क्रिकेट क्लबसँगको तेस्रो अभ्यास खेलमा ५ विकेटले विजयी भएको छ । टस जितेर पहिला व्याटिङ गरेको कोल्ट्सले ४९ ओभर ५ बलमा सबै विकेट गुमाएर २१६ रनको योगफल तयार पारेको हो । कोल्टस्का लागि हसन [&helli..
भक्तपुर, १० भदौ । श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका अवसरमा आज हर्षोल्लासका साथ नेवार समुदायले गुँपुन्ही पर्व धुमधामका साथ मनाउँदैछ । नेपाल सम्बतमा गुँलाथ्व पारुदेखि ञलाथ्व पारुसम्मको एक महिना गुँला अर्थात नवौँ महिना हो । गुँलामा पर्ने भएकाले यसको नेवारीमा नाम गुँपुन्ही रहन गएको र नवौँ महिना भएकोले पनि नेवार समुदायले कम्तीमा विभिन्न..
लैंगिक हिंसा विरुद्ध शिक्षा र शन्देसमुलक सामाजिक चलचित्र ‘अग्नीदहको’ च्यारिटी सो
काठमाडौ, ८ भदौ । महिला हिंसा तथा बोक्सी कुप्रथाको अन्त्यको लागि महाअभियान अन्र्तरगत चलचित्र अग्नीदहको च्यारीटी सो गरिएको छ । अखिल नेपाल महिला संघ भक्तपुर र मान्छे कहिल्यै वोक्सी हुँदैन राष्ट्रिय जागरण प्रतिष्ठान नेपालको संयुक्त आयोजनामा शुक्रवार भक्तपुरमा हिंसा विरुद्धको शिक्षामुलक, शन्देशमुलक सामाजिक चलचित्र अग्नीदहको च्यारीटी ..
किन भयो वर्षाको आलोचना ?
नायिका वर्षा शिवाकोटी विभिन्न फिल्ममा सुरुमा साइन गर्ने र सुटिङ सुरु गर्ने बेलामा हात झिक्ने गरेको चर्चा चल्न थालेको छ । मेरो पैसा खोई ? रानी महल, गोपीमा उनले सुरुमा फिल्म खेल्ने सहमती गरेपनि पछि हात झिकिन । गोपीमा उनी मुख्य भुमिकामा छानिएपनि अन्तिममा आएर हात झिकिन । स्क्रिप्ट रिडिङमा सहभागी भइन । प्रमोसनका लागि […]
सञ्चारकर्मी थापाले ल्याइन तीज कोशेली ‘व्रत बसेर पति पाइदैन'(भिडियो सहित)
नेपाली नारीहरुको महत्वपूर्ण पर्व तीज आउन केही दिन बाँकी छ । यतिवेला नयाँ -नयाँ तिजका गीत स्रोता र दर्शकमाझ आउनेक्रममा छन । हरेक वर्षजस्तै यो वर्ष पनि तीज भाकाहरु बजारमा आउनेक्रममा छन । युट्युब च्यानल र टेलिभिजनहरुमा अहिले तीज गीतको बाक्लो उपस्थिति छ। संचारकर्मी शारदा थापाले यो वर्षपनि तीजको नयाँ कोशेली चेलीहरुमाझ ल्याएकी छिन । ..
सुनिता अधिकारीले ल्याइन् तीज गीत ‘क्यारम मायालाई’ (भिडियो सहित)
काठमाडौँ, १८ साउन । लोकप्रिय गायिका सुनिता अधिकारीले तीजको कोसेली बजारमा ल्याएकी छिन् । पानको मिसीको सफलतापछि आफ्नो आठौं गीतका रुपमा उनले क्यारम् मायालाई बोलको तीज गीत बजारमा ल्याएकी हुन् । उनको एकल स्वरमा सुसज्जित गीतमा सुनिता आफैले अभिनय गरेकी छिन् । उनलाई अभिनयमा संचारकर्मी रामकुमार शाहीले साथ दिएका छन् । शिव हमालको शब्द र [..
छक्का पञ्जा ३ को पहिलो गीतमा दीपिका र दीपकको कम्मर यसरी भाचियो (भिडियो सहित)
दीपाश्री निरौलाको निर्देशन रहेको सिनेमा‘छक्का पञ्जा ३’को पहिलो गीत ‘पहिलो नम्बरमा’ सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक भएको गीतले दर्शकको माया पाइरहेको देखेर निर्माण पक्ष निकै खुशी देखिएको छ । ‘छक्का पञ्जा २’ मा गीत चोरेको आरोप बेहोरेको निर्माण टिमले यो गीतबाट सकारात्मक प्रतिकृया पाइरहेको छ जसले काममा थप हौसला र उर्जा प्रदान गरेको छ ..
काठमाडौं । अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह अहिले चर्चामा छिन् । यतिबेला उनको चर्चाको विषय अभिनेता आर्यन सिग्देलसँगको जोडी बनेको छ । यी दुवैले एकसाथ पहिलोपटक अभिनय गरेको चलचित्र ‘कायरा’ साउन १८ गते शुक्रबारबाट देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । प्रदर्शनको मिति नजिकिँदै गर्दा यी दुवै मिडियामा जताततै छाउन सफल भएका छन् । अहिलेसम्म अभिन..
‘मिस्टर फक्स एण्ड दी स्कूलब्वोई’कौशी थिएटरमा
काठमाडौं, ९ साउन । बालबालिका र जनावरबीचको मनोवैज्ञानिक सम्बन्धमा आधारित नाटक ‘मिस्टर फक्स एण्ड दी स्कूलब्वोई’ कौशी थिएटरमा मञ्चन हुँदैछ । ‘मिस्टर फक्स एण्ड दी स्कूलब्वोई’ मंगलबारबाट आगामी साउन १३ गतेसम्म मञ्चन हुने छ । नाटकमा बालबालिका र प्रकृतिबीचको सम्बन्धलाई प्रस्तुत गरिएको छ । नाटकको संयोजन एवं निर्देशन चे शंकरले गरेका छन् ।..
आयुष्मानसँग औँठी साटिन प्रियंकाले
प्रेममा रहेका जोडी नायिका प्रियंका कार्की र नायक आयुष्मान देशराज जोशीले इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । शनिबार सामान्य पारिवारिक जमघटबीच दुवैले औँठी साटेका हु्न् । आफूहरुबीचको प्रेम सार्वजनिक गरेका दुवैले अन्तत जीवनसाथीकारुपमा अघि बढ्ने निर्णय लिएका हुन् । इन्गेजमेन्ट कार्यक्रममा कार्की र जोशी परिवारका सदस्य सहभागी थिए । आयुष्मानकी बैंक..
भारत र मेलिनाको “चाहना यो मनको” सार्वजनिक
गायिका मेलिना राई र गायक भारत सिवाहाङ राईको आवाजमा तयार गरिको गीत “चाहना यो मनको”सार्वजनिक गरिएको छ । अडियो तथा म्युजिक भिडियो एक साथ विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरि सार्वजनिक गरिएको छ । सांगितिक यात्रामा नयाँ अनुहारका रुपमा आएका भारत सिवाहाङ राईलाई चर्चित गायिका मेलिना राईले साथ दिएकी हुन् । अहिले कक्षा १० मा अध्ययन गरिरहेका [&hel..